South American Nhabvu Vatambi- Zvepwere Nhau uye Biography Chokwadi
musha South AMERICA FOOTBALL STORies
Wese weSouth American Basketball ane Nhau dzeChidiki. Idzi nyaya dzinozadzwa nenguva dzisingakanganwiki dzinonakidza uye kubata. Basa redu pano nderekukutaurayi aya Mashopu pamwe neBiography Chokwadi yeSouth American Footballers.
Sei Tichitarira kuSouth America Nhau dzeNhau?
Kwemakore, takacherekedza dambudziko rinozivikanwa riripo pawebhu pamusoro penhau dzebhola. Iko kune geji yeruzivo inoenderana nekudiwa kweruzivo ruzivo rwakarongedzwa nezveSouth American Footballeers.
Nenzira yedu diki yekupa mupiro, timu yedu yakafunga kumisikidza iyi chikamu cheSouth America mugore ra 2016. Parizvino, isu takashungurudzika nemisheni yekuendesa Nhau dzeVechidiki uye Biography Nhau dzeSouth American Footballers.
Kutarisa mukati medu maodzanyemba ekuSouth America
Kutanga nekutanga, zvese zvinyorwa zvakagadzirirwa nezvematunhu enhabvu anochengetedza kuyerera kwega kwega mune yavo mharidzo. Mumashoko akareruka, edu ekuSouth America anokuudza zvinotevera.
Kutanga uye pamberi pezvese, tinounza iwe nyaya dzehudiki yeavo vanodzidzisa tsoka, kutanga nenguva yekuzvarwa kwavo kune kwavo kwekutanga hupenyu.
Tinokuunzira ruzivo nezve nhoroondo yeMhuri uye mabviro eSouth American Bhora. Izvi zvinosanganisirawo ruzivo nezvevabereki vavo (vanababa naamai).
Yetatu, tinokuudza Zvepakutanga zviitiko izvo zvakatungamira pakuzvarwa kwevashandi veSouth American Footballers.
Uyezve, nyaya inoenderera pamwe nezviitiko zvevashandi vavo vepakutanga.
Yedu nzira kuenda Mukurumbira Nyaya inotsanangura yega yega yeTussle South American Footballers inoenda mukuda kubudirira.
Zvadaro, yedu Rise kune Mukurumbira Nhau inokuudza iwe Kubudirira kwavo Nhau.
Isu tinoenda mberi kuti tikugadzirise iwe neRudo Nhau dzeSouth America nhabvu. Pano, hatina kungganhurirwa neruzivo nezvevasikana vavo uye Vakadzi.
Tevere, izvo Zvokwadi nezve Hupenyu hwevanhu veSouth American Bhora
Isu tinoita zvakare kuti mujairane nevemumhuri mavo, hama pamwe nehukama hwemhuri
Yekupedzisira asi kwete iyo rondedzero, tinokuunzira imwe Untold Chokwadi iwe yausina kumboziva iripo nezveSouth American Bhora.
Parizvino, isu takaputsa yedu South America Nhabvu Chikwata mune anotevera madiki madiki. Zvinosanganisira;
Kana wadzidza basa redu, unozoona izvozvo LifeBogger anotenda nepfungwa yekuvhara mapundu aripo mune ruzivo rwe Nyaya dzeUdiki uye Biography Chokwadi. Zvichitaurwa zviri nyore, hazvisi zvese zvekutarisa mutambo asi kuziva nyaya dziri kumashure kwemazita makuru padziro.
Isu tinoedza kururamisa kana tichiita zvatinoita zuva nezuva. Nomutsa Taura nesu kana iwe ukaona nyaya (s), zvikanganiso (s) kana zvinosiya (s) mune chero yedu zvinyorwa pamusoro peLatin American Footballers.
Pakupedzisira, tinokupa iwe Nyaya dzeChidiki uye Biography Chokwadi cheLatin American Nhabvu Vatambi.
123...8Page 1 pamusoro 8